दुई दिनमा कति कमायो ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ले ! | THE CINEMA TIMES
Box officeNepal Author:	The Cinema Times - Jul 16, 2017
दुई दिनमा कति कमायो ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ले !
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । शुक्रबार देखि प्रदर्शनमा आएको सिनेमा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ बक्सअफिसमा तहल्का पिटेको छ । सुदर्शन थापा निर्देशित सिनेमाले प्रदर्शनको तेस्रो दिनसम्म पनि देशभर हाउसफुल व्यापार गरेको छ ।
द सिनेमा टाइम्सलाई यो सिनेमाको दुई दिने कलेक्सन प्राप्त भएको छ । काठमाडौँ बाहिर सिनेमा वितरणको जिम्मा लिएका मनोज राठीले दिएको जानकारी अनुसार ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ले ६० लाख ग्रस कलेक्सन गरेको छ । लामो समय पछी दर्शक हलसम्म ओइरिएको जानकारी दिदै आइतबारसम्म सिनेमाको दर्शकमा गिरावट भन्दा पनि उच्च चाप बढ्दै गएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै काठमाडौँ भित्र सिनेमाले दुई दिनम १ करोड २० लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको वितरक रेखा थापाले जानकारी दिएकी छन् । रेखाले यसै सिनेमाबाट वितरणमा समेत हात हालेकी हुन् । रेखा इन्टरटेनमेन्टबाट काठमाडौँ उपत्यकामा सिनेमा वितरण गरेकी रेखाले सिनेमाको अत्याधिक माँगका कारण राजधानीमा थुप्रै हलमा शोज र पर्दा थप गरिएको बताइन ।
पल शाह र पुजा शर्मा मुख्य भूमिकामा अभिनित सिनेमाको दुई दिने कलेक्सन १ करोड ८० लाख पुगेको छ । यो कलेक्सन वर्षकै उत्कृष्ट हो ।
Tags:paul shah, Pooja Sharma, Rekha thapa, Sudarshan Thapa
दुई दिनमा कति कमायो ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ले !0out of5based on0ratings.0user reviews.
युट्युबमा क-कसले गरे ह्याट्रिक ! (भिडियो)
‘दुई रुपैयाँ’ले काट्यो करोडको केक !